Johane Chitsauko 08:1-20. Chidzidzo chakadzama pakukundikana kweMurairo
» Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Johane Chitsauko 08:1-20. Chidzidzo chakadzama pakukundikana kweMurairo
Johane Chitsauko 08:1-20. Chidzidzo chakadzama pakukundikana kweMurairo
Ichi ndicho Chitsauko 8.
Nomwe chiverengo chekuzadzisa. Mune mazuva manomwe muvhiki.
Saka chiverengo chechisere chinotanga kuita kutsva.
Jesu anoda kushandisa Chitsauko ichi kuratidza kukundikana kwemurairo. Saka Mwari aifanira kuzivisa kuita kutsva, Sungano itsva kuitira kuti vanhu vaponeswe kuzvivi.
VaFarise vakaedza asi vakatadza kusunga Jesu. Zvino Nikodimo akada kuti Jesu atongwe zvakafanira uye zvisina kubirirwa. Kana tikatsvaga chokwadi chaicho Jesu aizoparadza mano ekuita kwevafarise. Semapete, vakatizira kudzimba dzavo. Vaive vakurirwa kwenguva iyoyo asi vaizoramba vachiedza. Chinangwa chavo chimwechete chaive chekuparadza Jesu.
Chero nhasi, kune zvimwe zvinhu pamusoro peShoko rakanyorwa zvekuti vakuru vemakereke havagoni kumira nazvo.
Zvinosuwisa, vanosarudza kufuratira kana kushandura kana kurwisa mavhesi eBhaibheri asingavaitiri. Asi nemufaro vanotenda mune mamwe Magwaro. Zvinoita sekuti hakuna munhu nhasi anotenda Bhaibheri rese, nenzira yarakanyorwa nayo.
Nhanho yevaFarise yakatevera yaive yekupomera Jesu nhema .
Tarisai kumanikidza kuri mumibvunzo yavo yavaiti yakanaka pamutemo. Mupfungwa dzavo vaive vatotongera Jesu rufu kare.
Saka vakarangana kumuteya nemuteyo wakachenjera.
Vatungamiri vezvitendero zvechiJuda vaive vasingakwanisi kutenda zvese zvakanyorwa muShoko remazuva avo. Saka vaifanira kumuparadza nekuti aive chipingaidzo pakuita kwavo.
Kare nguva iyi isati yasvika vaive vatoronga kumuuraya.
Johane 5:16 Saka vaJuda vakatambudza Jesu, nokuti wakazviita izvozvo neSabata.
Izvi zvakaisa nzira yaizoitika nayo zvinhu. Vatungamiri vezvitendero vaive vasingadi Jesu Shoko raMwari.
VaFarise nevaSeduse vaida kwazvo kuita kwezvitendero zvavo kudarika rudo rwavaive narwo neMagwaro.
Nhorondo inozvidzokorora nhasi. Nhasi kune masangano anodarika 45 000 emakereke. Vatungamiri vawo vakasimudzirwa vanokudza dzidziso dzemakereke avo kudarika zvavanoita Magwaro. Vaya vanokoshesa kutevera Magwaro zvakazara vanobva vaita vavengi vekereke yavo.
Johane 8:1 Jesu akaenda kugomo reMiorivi.
VaFarise vese vaive vaenda kudzimba dzavo. Pachinzvimbo chekuendawo kumba Jesu akaenda kuGomo reMiorivi.
Izvi zvinoreva kuti Jesu, sezvo ari Shoko, akazvitsaura nekuziva kubva kuvatungamiri vezvitendero vasingatsvagi chokwadi cheBhaibheri, asi zvinangwa zvavo muzvitendero.
Maorivi anotaura pamusoro pemafuta eorivi, mucherechedzo wemweya Mutsvene.
Saka Gomo reMiorivi rinotaura zveMweya Mutsvene uchatitungamirira muchokwadi ndokunge tichizvitsaura kubva kuzvitendero zvisimo muMagwaro zvevatungamiri vemakereke vanopikisa Magwaro.
Gomo remiOrivi rakatsaurwa kubva kuTembere nemapani eKidironi.
Kidironi zvinoreva kuti kudzikatirwa kana kudzivirirwa. Chinhu chisingaonekwi zvakazara.
Izvi mucherechedzo wehuchenjeri hwedu vanhu hatigoni kuva nemufananidzo wakajeka wezviri kuitwa naMwari kunze kwekunge taenda munzvimbo dzepamusoro dzeMweya Mutsvene, mucherechedzo uri “mafuta” anobva muGomo reMiorivi.
Tinofanira kuzvitsaura kubva kuhuchenjeri hwevanhu nezvinofungwa nemakereke netsika dzawo kana tichida kunzwisisa chokwadi chemweya.
Johane 16:13 Asi kana asvika iye, Mweya wazvokwadi, uchakutungamirirai muzvokwadi yose:
Mateo 21:1 Vakati vachiswedera Jerusarema, vakasvika Betefage pagomo reMiorivi, Jesu akatuma vadzidzi vaviri,
2 Akati kwavari; Endai kumusha wakatarisana nemi, pakarepo muchawana mbongoro yakasungirwa, ine mhuru yayo; mudzisunungure, muvuye nadzo kwandiri.
Betefage zvinoreva kuti imba yemawonde asina kuibva.
Muwonde mucherechedzo weIsraeri. Kuti vaive vasina kuibva zvinoreva kuti vaive vasati vakukwanisa kugamuchira Messiasi.
Nguva yekereke yekupedzisira yeRaodikia yakatsanangurwawo sebofu.
Ndiyani anopofomadza vanhu? Anokwanisa chete kuita izvi muparidzi anotererwa nevanoenda kukereke.
Zvakazarurwa 3:17 ... handishaiwi chinhu; usingazivi kuti ... nebofu,
Saka nhorondo inozvidzokorora.
Kubva pagomo reMiorivi vadzidzi vakaenda kunosunungura mbongoro mbiri.
Vakapatsanura mbongoro kubva kumwene wadzo aive adzisungirira.
Uyu mucherechedzo wevanoenda kukereke vakasungirirwa patsika dzemakereke avo uye zvitendero nedzidziso dzisimo muMagwaro. Vanofanira kutsaurwa kubva kumisungo yevanhu Jesu asati atanga kuvashandisa. Ipapo ndipo panokwanisa mbongoro kutakura Shoko raMwari kupinda muJerusarema kuti zvakaprofitwa zvizadziswe.
Mbongoro mbiri dzaive dzakabatanidzwa dzichibva kumwene wadzo wekutanga dzakuendeswa kuna Jesu nevadzidzi vake.
Testamente Itsva yakanyorwa nevadzidzi vake vakazova mapostora. Kuti titende Testamente Itsva iyi tinofanira kutsauka kubva kumazano emakereke edu anhasi totungamirirwa nezvakanyorwa nevadzidzi pakutanga.
Ipapo ndipo patinokwanisa kutakura Jesu, Shoko raMwari, mumoyo yedu.
Mbongoro yechikadzi nemwana wayo.
Mukadzi mucherechedzo wekereke yechokwadi inodaidzwa kuti Mwenga waKristu.
Kereke yekutanga ndiyo huru yatinoona sembongoro huru pachidanho chave nekereke izvozvi.
Nguva yekereke yekupedzisira inomiririra vana vakadzoserwa pakutenda kwekutanga kwevapostora madzibaba.
Jesu akatasva mai vembongoro, asi mwana wayo akafamba parutivi achibvumirana nazvo zvakazara. Chokwadi chinotakurwa chete nekereke yemapostora eTestamente Itsva.
Kereke yekupedzisira chete ndiyo ichaita maKristu anotevera Magwaro zvakafanana nezvakaitwa nekereke yekutanga yeEfeso.
Izvozvi ngatitarisei muteyo wakaisirwa Jesu nevaFarise.
Johane 8:2 Mangwanani akadzokera zve kuTembere, vanhu vose vakavuya kwaari; akagara pasi akavadzidzisa.
3 Vanyori navaFarise vakavuya kwaari nomukadzi wakanga abatwa achifeva vakamuisa pakati pavo.
4 Vakati kwaari: Mudzidzisi, mukadzi uyu abatwa achifeva, ipapo pamene.
5 Zvino Mosesi wakatiraira pamurairo kuti vakadzi vakadaro vatakwe namabwe; zvino imi munoti kudiniko?
6 Vakareva izvozvo, vachimuidza, kuti vawane chavangamupomera mhosva nacho. Asi Jesu wakakotama, akanyora pasi nomunwe.
Kuva mumiririri mumatare edzimhosva rinogona kuva basa rakaipa kwazvo kana hunyanzvi munezvemitemo hukashandiswa kuranga vasina mhosva. Vaishandisa ruzivo rwavo munezvemitemo kuteya Jesu nekunyepera kutsvaga kuyananisirwa. Vaive vasingaedzi kutsvaga chokwadi.
RUKA 11:52 Munenhamo imi, vadudziri vemurairo! Nokuti makabvisa kiyi yokuziva:
Kushandisa murairo kuyananisira zvinangwa zvakavanzika kunoipisa kuita kwemutemo zvakazara.
VaFarise vaive nechinangwa. Vaishuvira kuparadza Jesu chete.
Vaive vakachenjera kwazvo vakafunga kuti vaive vabata Jesu mumuteyo wavo.
Mukadzi aive nemhosva uye Murairo waMosesi waiti anofanira kufa.
Dai Jesu akatenderana nazvo, aidaro akatongera mukadzi uyu rufu. Dai akaita izvi aisazokwanisa kuva Muchinda weHupenyu, Messiasi.
Kubvuma kuti mukadzi aurawe kwaizodzima hushumiri hwake hwekuponesa vanhu kubva kuzvivi aizokundikana kuponesa mukadzi uyu.
Pamusoro pazvo zvose, Messiasi akauya kuzoponesa maJuda, kwete kuvauraya.
Nerumwe rutivi, dai akati havafaniri kumuuraya anenge arega kuterera Murairo waMosesi. Izvi zvaiita kuti atongerwe rufu nekuti vaizoti akarwisa Murairo waMosesi.
Zvino vatungamiri vechitendero ava vaizova vagona kukunda pachinangwa chavo. Vaizowana chikonzero chekumuuraya.
Chiitiko chese chaive charongwa. Kunyepedzera kuti vaida kuuraya mukadzi, vaiziva kuti Jesu aizoda kumurwira kubva pakuda kwavo kuuraya. Ipapo vaizotendeukira kuna Jesu nehasha dzavo nerudo rwavo rukuru rwekumuuraya.
Johane 8:6 Asi Jesu wakakotama, akanyora pasi nomunwe (sokunge aive asingavanzwi) [zvakakomberedzwa ndiko kupedziswa kwevhesi iri muBhaibheri rechirungu.]
Ichi ndicho chimwe chezviitiko zvinokatyamadza muBhaibheri.
Jesu aive nemhinduro yakanakisa asi pachinzvimbo chekuvadaira, akanyora nemunwe wake pasi.
Tinofanira kurangarira kuti Jesu anofunga muzvikamu zvakadzama kudarika zvamunoita nezvandinoita.
Mosesi akaburuka kubva muGomo reHorebu (kana Sinai) nemahwendefa maviri akanyorwa.
Jesu akaburuka kubva kuGomo reMiorivi akanyora pasi.
Kuyanana kwezviitiko zviviri izvi kwaive kwei?
Isaya 55:8 Nokuti ndangariro dzangu hadzizi ndangariro dzenyu, nenzira dzenyu hadzizi nzira dzangu, ndizvo zvinotaura JEHOVA.
9 Nokuti denga sezvarakakwirira kupfuvura nyika, saizvozvo nzira dzangu dzakakwirira kudarika nzira dzenyu, nendangariro dzangu kupfuvura ndangariro dzenyu.
Apa Jesu aiti, “Muri kuda kundibata muchishandisa Murairo waMosesi. Munokanganwa kuti iye Mosesi pachake aive mhondi. Zvino Mosesi paakakwira gomo kunouya neMurairo, madzitateguru enyu echiJuda vakaita hunhu hwehupombwe hunonyangadza kwazvo nechifananidzo chakashama.
EKSODO 32:25 Zvino Mosesi wakati aona kuti vanhu varasha JEHOVA, nokuti Aroni wakanga avarashisa, kuti vasekwe navavengi vavo.
Mosesi, nekutsamwa kukuru, akakandira pasi mahwendefa emabwe akava munhu wekutanga kuputsa mitemo yese ine gumi.
Eksodo 32:19 Zvino wakati aswedera kumisasa, akavona mhuru nokutamba. Ipapo shungu dzaMosesi akakanda mahwendefa aive mumavoko ake pasi, akaaputsa mujinga megomo.
Ndiyani anoziva kuti vana vangani vakaitwa muhupombwe panguva iyoyo. Saka vanhu vose vaipomera mukadzi uyu vaive vangani vaive vabuda mudzinza raive rambobatwa nehupombwe.
Asi madzitatenguru avo aive akambopinda muhupombwe. Vaive vasina chekuzvitutumadza nacho kana takatarisana nemadzitateguru avo.
Vaive vasina hunhu vachingoda mafaro chete zvekuti Joshua paakapinda muNyika yeChipikirwa paJeriko, munhu wekutanga kuponeswa aive chifeve Rahabu. Aive mucherechedzo wehunhu hwemaJuda apo Mosesi aive mugomo reHorebu (kana Sinai) achigamuchidzwa gumi remutemo.
Jesu akabva atora chidzidzo chake murunyararo kuchiendesa pakadzama.
Nei akanyora pasi nemunwe wake?
Mosesi akaputsa mahwendefa emabwe. Mafufu emabwe akaputsika anoenda nemvura uye nemhepo kudzamara aita ivhu.
SeMwanakomana waMwari, Jesu akanyora pasi nemunwe wake.
Apa, aivaudza kuti, saMwari, aive ambotanga kunyora Murairo nemunwe wake pamabwe.
EKSODO 31:18 Zvino wakati apedza kutaura naMosesi pagomp reSinai, akamupa mahwendefa maviri echipupuriro, mahwendefa amabwe akanga akanyorwa nomunwe waMwari.
Jesu apa aiedza kutaura kuti, “Munofunga kuti mungandibata pamusoro peMurairo waMosesi? Ndini Mwari akapa Mosesi Murairo iwoyo”.
Asi Murairo waiitwa kuti uomese zvinhu nevaFarise hauna kubatsira.
Murairo hauna kunge washandura rudo kana tsitsi pakati pemaJuda.
Vaive vachiri kuda kuurayana. Chero Mosesi akaputsa mirairo iyi yese mucherechedzo wemahwendefa emabwe achiparara.
SeMwanakomana waMwari, Jesu akanyora Mitemo ine gumi nemunwe wake pasi.
SaMosesi, Jesu aive achangobva kuburuka mugomo reMiorivi, kuti adzidzise maJuda pamusoro peMurairo. Asi Jesu akakoshesa kuti Murairo waive wakundikana zvakadii kubvisa rudo rwekutadza mavari.
Saka Jesu akatangira paive pasiirwa naMosesi.
Mosesi aive aputsa mabwe aizova sevhu. Saka Jesu akanyora Murairo pasi.
Asi uku kwaingove zvakare kutambisa nguva. Mhepo nemvura inonaya zvaizodzima paakanyora. Nemuenzaniso uyu, airatidza kukundikana kweMurairo kwakazara.
Murairo, wakanyorwa pamabwe, wakakundikana kushandura maJuda kuti vave vanhu vari nani.
Murairo waive wapihwa kumaJuda murwendo rweEksodo kuti uvaite rudzi rwevanhu vakatsaurwa kubva kunyika yose.
Eksodo 33:16 Nokuti zvichazikanwa seiko kuti ndakawana nyasha pamberi penyu, ini navanhu venyu? Hakuzi kuti muende nesu, tigova vakatsaurwa, ini navanhu venyu pakati pavamwe vanhu vose vapanyika dzose here?
Mwari haadi kunamatwa nemaitiro enyika, kana nenzira dzemitambo yemaPegani dzakagadziriswa.
Asi maJuda vakakundikana kuramba vari vanhu vakatsaurwa. Saka Murairo wakakundikana.
Murairo, wakanyorwa pasi pakaitwa nemabwe akafufunyuka, waive usingashandi.
Makore 1500 mumashure maMosesi chii chaive chagona kuitwa neMurairo?
Chinhu chimwechete chaidiwa nemaJuda aya aive akazara zvivi kwaive kuuraya mumwe muJuda aive atadza.
Ndiko kwaive kuita kwavo vachimupomera zvekuti vaFarise havana kutsvaga kuranga murume aive atadza pamwechete naye.
Hapana kuyananisirwa apa. Vaingoshandisa mukadzi semujenya wekubata nawo Jesu.
Zvakadaro, vaitsvaga kwazvo kuuraya Messiasi wavo. Vaive vanyura kwazvo muhuwori uye zvinangwa zvavo zvaive zvakavanda.
Deuteronomio 18:15 JEHOVA Mwari wako uchakumutsira muprofita, unobva pakati pako, pahama dzako, wakafanana neni; unofanira kumuterera iye.
Dai vakaterera Mosesi, vangadai vakatevera Jesu.
Asi vaishandisa Murairo waMosesi kuramba Jesu.
Zvakare, nhorondo yakazvidzokorora.
Tinofanira kushandisa zaruriro dzakawanikwa mune zvakataurwa nehama Branham kuti titevere zvitendero zvedu mumavhesi eBhaibheri Shoko raMwari rakanyorwa.
Asi vanhu vazhinji veMharidzo vari kushandisa zvakataurwa nehama Branham kuti zvitore nzvimbo yeBhaibheri, saka vanoramba Magwaro akanyorwa. Saka vari kuvaka kutenda kwavo kwefungidziro pamusoro peKutinhira kunomwe kusina kunyorwa muBhaibheri.
Asi mhinduro imwechete inoshanda yakapihwa Diaborosi naJesu yaive yekuti “Kwakanyorwa kuchinzi ...”.
VaFarise vaive vasina pfungwa dzekutevera chidzidzo chavakapihwa naJesu pamusoro pekuti Murairo waive wakundikana sei. Murairo waive usina kuita kuti maJuda vave vanhu vari nani kuti vagone kuziva Messiasi wavo.
Saka vakaramba vachimanikidza Jesu kuti avape mvumo yekuuraya mukadzi.
Johane 8:7 Zvino ivo vakati vachiramba vachimubvunza, akakotoroka, akati kwavari: Usine chivi pakati penyu, ngaatange kukande-bwe kwaari.
Jesu akavapa mhinduro yakanakisa iyi. Hakuna akagona kupokana nekutaura uku.
Saka aive anyora mitemo ine gumi pasi. Zvino, seMwanakomana waMwari, akanyora mitemo ine gumi kechipiri. Nei?
Nekuti, saMwari, aifanira kuyora gumi remitemo kechipiri achiipa kuna Mosesi.
Eksodo 34:1 Zvino JEHOVA akati kuna Mosesi: zvivezere mahwendefa maviri amabwe akafanana nookutanga kuti ndinyore pamahwendefa mashoko aya akanga ari pamahwendefa okutanga awaputsa.
Munhu mumwe nemumwe ane izwi rinomudzora mukati make rinomira semupurisa.
Patinoita zvakaipa, izwi remukati medu iri rinotiudza. Munhu akachemberesa akararama zvakanyanyisa saka akatadza zvakawandisa. Akatanga kubva, akazoteverwa nevamwe vapomeri vose vaive vazere zvivi.
Johane 8:9 Zvino ivo vakati vachizvinzwa, hana dzavo dzikavarova, vakabuda mumwe-mumwe, kutanga vakuru kusvikira kunowokupedzisira; Jesu akasara ari oga, nomukadzi wakanga amire pakati pavo.
Zvino chiitiko chaive chashanduka. Kwakasara mukadzi mutadzi naJesu chete.
Asi mukadzi mucherechedzo wekereke nekuti kereke yechokwadi inodaidzwa kuti mwenga waKristu.
Saka chiitiko ichi mucherechedzo waJesu achiponesa kereke izere zvivi.
MaJuda vaizoramba mukana wavaive nawo wekuponeswa. Asi Mwari aizotendeukira kuvaHedeni oponesa kereke yevaHedeni izere zvivi munguva imwe neimwe yekereke.
Johane 8:10 Jesu akakotoroka; zvino asingavoni munhu, asi mukadzi oga, akati kwaari: Mai, vaya vakupomera mhosva varipiko? Hakuna wakutonga here?
Hazvirevi chinhu kuti vanhu vapomere munhu pamwe nekumutonga. Tese tiri vatadzi. Saka kutonga kwedu vamwe kwakaipa kwazvo sezvo tese tichiona kuti nesuwo tiri midziyo inotadza.
VAROMA 3:23 Nokuti vose vakatadza; vakasasvika pakubwinya kwaMwari.
VAROMA 2:1 Saka haunepembedzo iwe munhu, upi noupi, unotonga vamwe, nokuti pachinhu icho chaunotonga umwe nacho, unozvipa mhosva iwe, unotonga, unoita zvinhu izvozvo.
Isu vanhu tinokasika kwazvo kupomera vamwe, zvinhu zvatinotadza isu.
JOHANE 8:11 Iye akati: Hakuna, Ishe! Jesu akati kwaari: Neni vo handikupi mhosva. Enda hako, usatadza zve.
Izvi zvakazadzisa Evangeri. Jesu akauya kuzoregerera uye kuponesa kereke mukati menguva nomwe dzese dzekereke. Akaronga kutendeutsa vatadzi kuvaita vatsvene kuti vamuzive muruwadzano rwemunhu naJesu pachke runobva pakutendeuka kwake.
Jesu anogona sei kutiita kuti tipere rudo rwekutadza?
MABASA 2:38 Petro akati kwavari: Tendevukai, mumwe nomumwe wenyu abapatidzwe nezita raJesu, kuti mukanganwirwe zvivi mupiwe chipiwa chomweya mutsvene.
Zvino Mweya Mutsvene waKristu unozogara mumoyo yedu kuti utitungamirire muzvokwadi yose.
Johane 16:13 Asi kana asvika iye, Mweya wazvokwadi, uchakutungamirirai muzvikwadi yose.
Mwari akaita Adamu kubva muguruva renyika.
Genesisi 2:7 JEHOVA Mwari akaumba munhu neguruva revhu, akafuridzira mweya wevupenyu mumhono dzake; munhu akava mweya mupenyu.
SaMwari, Jesu akanyora Murairo nemunwe wake pamahwendefa emabwe. Dombo rinofufunyuka kuita ivhu.
SeMwanakomana waMwari, Jesu akanyora nemunwe wake muvhu. Asi kubva muvhu tinowana guruva rakashandiswa naMwari kuita moyo yevanhu.
Zvino seMweya Mutsvene waMwari, Jesu achagara mumoyo wemunhu onyora mirairo yake mukati memoyo yevanhu.
Asi Murairo wakanyorwa pamahwendefa maviri emabwe. Uye moyo wemunhu wakaoma kudarika mabwe.
Saka moyo yedu inofanira kuputsika mukutendeuka.
Zvino chikamu chemukati chakapfava chemoyo chinobuditswa pachena kuti munwe waJesu anogara mumoyo yevakatendeuka seMweya Mutsvene unyoremo.
Mweya Mutsvene unonyora Murairo waMwari mumoyo yedu zvinotiita kuti titende kushoko raMwari, kwete nekuti tinofanira kuterera Murairo waMwari, asi nekuti tinoda kuterera Shoko raMwari.
Rudo rwedu rukuru rwekuti tinoda kwazvo kuzviita runobva pamoyo yedu.
Mabasa edu uye zvatinotenda hazvizobvi pakumanikidzwa kana pakuti nekuti mutemo wakadzikwa kana kutya kurangwa kana shuviro dzekutendwa.
Zvinonyorwa nemunwe waMwari, anova Mweya Mutsvene mukuru, mumoyo yedu ndezvekuti tinofanira kuda Mwari nevanhu. Vehukama, vehushamwari uye vavengi vedu.
Munwe unonyorawo kuti zvakaropafadzwa kupa pane kugamuchira.
Munwe unonyorawo kuti Shoko raMwari rakanyorwa, Bhaibheri reKing James Vhezheni, ndiro Mukuru wedu watinoda kutenda maari.
Apa tinenge tane rudo rwakadzama nechokwadi cheBhaibheri.
Tinoda kudzidza nekuziva zvakavanzika zveMagwaro nekuti zvinozivisa kwatiri nzira dzinofadza dzinofunga nekuronga naJesu.
Panoitika nhanho yetatu iyi, ndipo patinova vanhu vari nani ipapo zano raMwari guru rinenge rashanda muhupenyu hwedu.
Jeremia 31:31 Tarira mazuva anovuya – ndizvo zvinotaura JEHOVA – andichaita sungano itsva neimba yaIsraeri, vuye neimba yaJuda.
32 Haingafanani nesungano yandakaita namadzibaba avo namazuva andakavabata ruvoko ndikavabudisa munyika yeEgipita, vakaputsa sungano yangu iyo, kunyange ndakanga ndiri murume kwavari – ndizvo zvinotaura JEHOVA.
33 Asi heyi sungano yandichaita neimba yaIsraeri shure kwamazuva iwayo – ndizvo zvinotaura JEHOVA: ndichaisa murairo wangu mukati mavo, ndichaunyora pamoyo yavo; ini ndichava Mwari wavo, ivo vachava vanhu vangu.
Murairo unoratidzika sei kana wanyorwa mumoyo yedu?
Mateo 22:36 Mudzidzisi murairo mukuru pamirairo ndoupiko?
37 Akati kwaari: Ida Ishe, Mwari wako, nomoyo wako wose, nomweya wako wose, nokufunga kwako kwose.
39 Wechipiri unofanana nawo ndiwoyu: Ida wokwako sezvaunozvida iwe.
Jesu seMweya Mutsvene paanonyora nemunwe wake mumoyo wenyu wakatendeuka munopedzisira makuda Mwari nevanhu (kusanganisira vavengi venyu).
Mwari ndiye Shoko. Saka kana muchida Mwari munodawo Bhaibheri rakanyorwa.
Pamunodzidza zvakavanzika zveMagwaro, munodzidzawo kuda mafungiro aMwari.
Uhu hupenyu hutsva hwakazara, hunobva pana Kristu seMweya Mutsvene unogara mukati memunhu.
Zvikamu zvina zvemoyo zvinotiyeuchidza pamusoro pezvisikwa zvipenyu zvina zvinogara zvakakomberedza chigaro chaMwari chehushe kuDenga.
Zvakazarurwa 4:6 Pamberi pechigaro chovushe pakanga panegungwa rakavonekera, rakafanana nekristaro; napakati pechigaro chovushe, napamativi ose echigaro chovushe, pakange panezvisikwa zvina zvipenyu, zvizere nameso mberi neshure kwazvo.
Mateo 6:10 Vushe bwenyu ngabwuvuye, kuda kwenyu ngakuitwe panyika, sezvakunoitwa kudenga.
Zvinoitika panyika zvinofanira kuratidzira zvinoitika kuDenga.
Saka chigaro chimwechete chevushe china Jesu panyika chiri mumoyo yevanhu vakatendeuka.
Kurarama mumoyo wemunhu nezvikamu zvawo zvina zvinorangaridza Jesu pamusoro pechigaro chake chevushe kuDenga chakapoteredzwa nevarindi vana vane simba. Ndiyo mweya inochengetedza nekutungamirira kereke, Muviri wake, mukati mekufamba kwenguva munguva nomwe dzemakereke.
Mweya ine simba kwazvo iyi inokwanisa kuratidza kereke kuti yoitei uye yotenda mune zvipi mukati mezviitiko zvenhorondo yevanhu.
Saka nei Jesu akanyora murairo kaviri pamabwe uye kaviri pasi?
Nekuti nhanho yetatu yaizodzokororwa kaviri mukati menguva dzemakereke.
Nguva yekereke yekutanga yaive nerubapatidzo rweMweya mutsvene rune simba uye vaitenda kudzidziso dzemapostora dzaive dzakanyorwa muTestamente Itsva.
Totenda kurudziro yemapostora, kereke yekutanga yakagadza Jesu mumoyo yevanhu.
Mweya Mutsvene wakavatungamirira muchokwadi chese chemuBhaibheri muTestamente Itsva.
Johane 16:13 Asi kana asvika, iye Mweya wazvokwadi; uchakutungamirirai muzvokwadi yose:
Asi mapostora akabva afa, hutungamiri hwevanhu hukatora kereke hukaibvisa paMagwaro akanyorwa. Tsika dzevanhu nemafungiro avo akaita seKisimusi neTiriniti chero kunzi kudya apura chivi zvakasungirira nguva dzemakereke mukutadza.
Munguva yekereke yekupedzisira chete yeRaodikia ndimo Mwari paachatumira mutumwa wenguva yekupedzisira kuzotidzosera pakutenda kwekutanga kwekereke yekutanga yakaratidzwa nzira nemapostora.
Saka munguva yekereke yekupedzisira, kechipiri munhorondo yekereke, kuchave nevatendi vanotevera zvakazara dzidziso dzemapostora akanyora Testamente Itsva.
Nguva yekupedzisira inofanira kubereka vanhu vakafanana nevenguva yekereke yekutanga.
Pamunokohwa mbeu, inenge yakafanana nembeu yakakushwa.
Jesu, Shoko, akatakurwa kupinda muJerusarema nembongoro huru yacho. Vaive vachiperekedzwa “nemwana” wembongoro iyi akatevera nekuterera kwakazara mubereki wake.
Mweya waKristu uyu unofanira kutsiva mweya wedu wevanhu wakare patinodzidza kufa kuzvivi zvedu.
Jesu akadzinga vatungamiri vezvitendero nezvinangwa zvavo zvaive zvakavanzwa kuti mukadzi aipomerwa asare ari ega. Saka vatungamiri ava vaive vamuvenga nekuti aive avakurira vakatsvaga kumuparadza, Shoko, nekuti aive chipingaidzo pakubata kwavo pamusoro pevanhu. Vatungamiri vezvitendero vaive vasingade kurasikirwa nesimba ravaive naro pamusoro pevanhu.
Jesu aive ambodzingawo vaiita mari muTembere.
Kuparadzanisa vakuru vezvitendero kubva kumari yavo chaive chinhu chavaisazotambira.
Johane 2:13 Paseka yavaJuda yakanga yava pedyo, Zvino Jesu akakwira Jerusarema.
14 Akawana mutembere vaitengesa mombe, namakwai nenjiva, nevaitsinhana mari vagere’mo.
15 Akaruka tyava yorwonzi, akabudisa mutembere makwai nemombe zvose, akaparadza mari yavaitsinhana, nokuwisa matafura avo.
Kana uchida kuva muvengi wehupenyu, iva chipingaidzo chenzira inouya nemari yemutungamiri wezvechitendero.
Mapasita vanoti chegumi ndechavo, kunyange zvazvo pasina Magwaro anotaura kudaro.
Kuparadzanisa pasita nemari yake. Zvinoreva hondo.
Ngatidzokerei kumukadzi aipomerwa aive apatsanurwa kubva kuvatungamiri vezvitendero vaive vafamba kubva kuna Jesu, saka vaive vafamba kubva kuShoko raMwari. Zvino Jesu aikwanisa kutsanangura zvaive zvaitika kumunhu mumwechete akazvimiririra, semukadzi mutadzi aive asiiwa ari ega naShe. Izvi zvinoreva chero munhu asangana naShe Jesu kupfurikidza kumugamuchira mumoyo make ari ega.
Mweya Mutsvene waKristu unobva waita chiedza chemukati chinotungamirira munhu nenzira yeMagwaro apo mavhesi eBhaibheri anozivisa zaruriro yeBhaibheri yakadzama.
Johane 8:12 Zvino Jesu wakataura zve navo, akati: Ndini chiedza chenyika unonditevera haangatongofambi murima, asi uchava nechiedza chovupenyu.
Jesu mumoyo mako anokupa chiedza chemukati chinokutungamirira tsoka dzako uye sarudzo dzako.
Pamusoro pazvose. Mweya waMwari unokuitai kuti mutende nekutevera Bhaibheri.
Johane 8:13 Naizvozvo vaFarise vakati kwaari: unozvipupurira iwe; kupupura kwako hakuzi kwazvokwadi.
Vatungamiri vezvitendero vakati aisafanira kutaura zvinhu pamusoro pake.
Vaparidzi vese vanotaura pamusoro pavo kuitira kuti vawane vateveri. Asi vari kutungamirira vanhu vakananga kupi?
Johane 8:14 Jesu akapindura akati kwavari: kunyange ndichizvipupurira, kupupura kwangu ndekwazvokwadi; nokuti ndinoziva kwandakabva, nokwandinoenda, asi imi hamuzivi kwandakabva, nokwandinoenda.
VaFarise vakafunga kuti vamugona. Vaifanira kumutenda sei nekuda kwezvaanotaura chete pamusoro pake?
Asi vakatarisira pasi zvishamiso zvakaitwa naJesu. Kushandura mvura kuita waini pamuchato wepaKana. Kumira paKana achiporesa varwere paKapenaume. Kupa vanhu zviuru zvishanu chekudya kubva pambuva yemwanakomana pakasara matengu gumi nemaviri emafufu. Kufamba pamusoro pegungwa rakatsamwa. Kuzivisa hupenyu hwaive hwararamwa nemukadzi muSamaria.
Ichi chaive chipupuriro chaisabvunzwa kubva pakutaura kwake. Zvinhu izvi zvaive zvaonekwa zvichiitika.
Hakuna muFarise kana mukuru wechitendero aikwanisa kukwikwidza naye kana kuzvienzanisa naye pasimba rake rinoshamisa raaive naro.
Saka vaFarise vaive vakurirwa zvakazara nezvishamiso zvake vaive vasina kana ruzivo rwekuti simba rake raibvepi. Kana kuva neruzivo rwekuti ramagwana rake aizoitei.
VaFarise vaive vakaisirwa muganhu netsika dzavo uye zviyera-yera zvavo. Vaida mirairo yevanhu yaivaudza zvekuita uye yaivapa muripo. Vaive vadzikisira kutenda kwemaJuda kukuita dzokororo yetsika dzevanhu.
Vaive vasina kana fungidziro yekuti vangashanda sei neUmwe Munhu aive kunze kwezvitendero zvavo uye aitungamirirwa neMweya waMwari usingaonekwe.
VaFarise vaive vasina fungidziro dzekuti kwaizova nemunhu angazadzise Magwaro.
VaFarise vaive vasinawo ruzivo rwekuti vangatadza zvakanyanya. Vaifunga kuti vaive nechokwadi chese chakazara. Sevatungamiri vemakereke vanhasi vanoramba kwazvo kuti kereke yakarara uye ibofu haione zvisinei nekuti Bhaibheri rinotsanangura nguva yekereke yekupedzisira nemazwi iwayo.
Jesu akatsanangura maKristu akaponeswa panguva yekupedzisira sevasikana gumi vakachena. Vamwe vaive vakangwara vamwe vakapusa. Asi vose vaive vakavata vakakotsira.
Kereke yekupedzisira yeRaodikia yakadaidzwa kuti bofu.
Johane 8:15 Imi munotonga nenyama; ini handitongi munhu.
VaFarise vaive vasina kutonga kwemweya. Vaida kumuuraya panyama nekuti aive chipingaidzo pasimba ravo rekutonga nekushandisa vanhu. Aivewo chipingaidzo panzira dzavo dzekuita nadzo mari. Vaingokwanisa kuona zvinhu zvaaivatadzisa pasimba ravo nemari dzavo zvenguva iyoyo. Kurwira vanhu vaivatevera hakuna kubvira kwauya mupfungwa dzavo. Vaingofunga nezvavo chete pavairangana kuti vaparadze Jesu.
Jesu haana kutonga. Ndicho chikonzero akasiya mukadzi mutadzi.
Johane 8:16 Asi kunyange ndichitonga, kutonga kwangu ndokwazvokwadi; nokuti handizi ndoga, asi ini nababa vakandituma.
Asi dai akatonga kwaizova kutonga kwazvokwadi. Nei? Nekuti Mweya waMwari waive Baba vake uye Mwari agara ari Mwari akarurama. Mwari haakanganisi.
Zvishamiso zvaakaita zvinogona kuitwa chete kana Mwari anoshamisa achigara mukati make.
Johane 8:17 Vuye mumurairo wenyu makanyorwa, kuti kupupura kwavanhu vaviri ndokwazvokwadi.
Saka Jesu aive asiri iye ega aitaura nezvake. Mwari wamasimba ose anobva kuDenga airatidza kuti uyu aive Mwanakomana wake. Minana yake nekunaka kwayo kwaisagona kufuratirwa.
Johane 8:18 Ndini ndinozvipupurira nababa vakandituma, vanondipupurira vo.
SeMunhu Jesu aikwanisa kutaura pamusoro pechinangwa chake panyika. Asi simba rinoshamisa raaikwanisa kuratidza raireva kuti Mwari anoshamisa aipupurawo nezvake kupfurikidza mabasa ake.
Johane 8:19 Zvino vakati kwaari, Baba vako varipiko? Jesu akapindura akati: Hamundizivi ini, kunyange nababa vangu vo; dai maindiziva ini, maiziva vo nababa vangu.
Baba, Mweya waMwari, waigara muMunhu Jesu uchiita zvishamiso. Chero munhu aigona kuita mabasa anoshamisa aifanira kuva nemweya waMwari unoshamisa maari.
Mateo 1:20 Zvino wakati acharangarira izvozvo, tarira, mutumwa waShe akazviratidza kwaari pakurota, akati: Josefa mwanakomana waDavidi, usatya kutora Maria, mukadzi wako; nokuti chakagamuchidzwa mukati make ndechoMweya Mutsvene.
Munhu akaisa mbeu yehupenyu mumimba yemukadzi ndiye baba vemwana waanotakura.
Mweya Mutsvene ndiwo wakaisa Mbeu yeHupenyu Husingagumi mumimba yaMaria. Saka Mweya Mutsvene ndiwo baba vaJesu.
Asi mwana wemunhu anokwanisa chete kuita baba vamwechete.
Johane 8:20 Wakataura mashoko awa pachivigiro chemari achidzidzisa mutembere: kwakanga kusinomunhu wakamubata, nokuti nguva yake yakanga isati yasvika.
Jesu aive ava pachivigiro chemari. Apa ndipo paaive adzinga vaitsinhana mari mutembere. Asi vese vaimutya. Kutsamwa kwake pamusoro perudo rwavo rwemari kwaibwinya mumaziso ake ivo vakaramba vari kure.
Nei Jesu aive akatsamwa pamusoro pevaitsinhana mari mutembere?
Nekuti akaona mweya webhizimisi mukuru wekereke yenguva yekupedzisira yeRaodikia. Vatungamiri vemakereke vaizova vakapfuma kwazvo, asi vasingagutsikane nezvavanenge vanazvo. Kureruka kwaive mukereke yekutanga hakugoni kutevedzerwa nenguva yeRaodikia inoda zvinhu inoramba dzidziso dzeMagwaro dzemaprofita nekuda kwerudo rwavo rwemari.
Kereke yakatangwa nemuvezi aive murombo.
Mudzidzi weBhaibheri, Dr. Richard Halverson akambotaura kuti, “MaGiriki pavakawana Evangeri, vakarishandura kuita firosofi; maRoma pavakawana Evangeri, vakarishandura kuita hurumende; vekuEurope pavakawana Evangeri, vakarishandura kuita tsika nechinyakare chavo.
Asi vekuAmerica pavakawana Evangeri ... vakarishandura kuita bhizimisi guru!”
Masangano ezvitendero akarongwa nevanhu haakoshese Mwari, sezvaanozviita iwo. Vanhu vanofa nenzara, apo vatungamiri vemakereke vazhinji vachiita mamiriyoni vaine zvinhu zvekurarama hupenyu hwepamusoro-soro pamwechete nevakapfuma kwazvo.
Mushakabvu Ron L. Hubbard wekereke yeScientology akambotaura kuti: “Kana muchida kuita mari munyika yanhasi, munofanira kutanga kereke.”
Kereke yeCatholic pasi rese ine hupfumi hwakawandisa, ine nzvimbo dzeminda dzakawandisa kudarika chero mamwe mapato ese pasi rese. Vatican ine mabhiriyoni emadhora ari mugoridhe riri mumasefa ayo, rakawanda racho rakachengetwa mumatura egoridhe ebhanga reFederal reU.S., mabhanga muEngland neSwitzerland akachengeta rimwe rese. Asi chingori chikamu chiduku chehupfumi hweVatican, huri muU.S. chete, hwakakura kudarika hupfumi hwemapoka mashanu akapfumisa acho emunyika yese. Kereke ine hupfumi hwakawandisa munezvezvivakwa, zvemidziyo, zvemari nezviwanikwa kudarika mamwe mapato ese, mabhanga, hurumende, kana nyika, zvichiita Pope, mutongi ari pamutemo wezvinhu izvi zvese, munhu akapfumisisa munhorondo yanhasi. Chokwadi kuunganidza hupfumi kwekereke yeCatholic kwakava kwepamusoro kwazvo kudarika zvingafungidzirwa. Hakuna angafungidzira kuti Pope anokosha zvakadii muzvikamu zvemabhiriyoni emadhora uye kereke pachayo nemano ayo inoisa midziyo yayo yakaitwa nemabasa emawoko pakukosha kwe Euro rimwechete, saka midziyo iyi haifi yakatengeswa. Uye hairipi muripo wemutero kune chero nzvimbo.
Johane 13:29 Vamwe vakanga vachiti, Judasi zvaaigara aine chikwama
Pavadzidzi vekutanga, Judasi ndiye aigara nemari.
Kuzviunganidzora mari ndiko kuwira pasi kwekereke yeRaodikia.